War / Waraysiyada
Cabdi Weli Gaas
Madaxweynaha Puntland waxa uu sheegay in Puntland aysan aqbalin in aqalka hosoe ee baarlamanka lagu soo dhiso nidaamka 4.5.
Hore Wareysi: Wasiirka Batroolka SoomaaliyaWasiirka ayaa ka qeyb galaya shir ku saabsan qaabka loo wadaagayo khayraadka iyo shidaalka dalka Soomaaliya.
Wareysi: Taliyaha Booliska SoomaaliyaTaliyaha waxa uu dawladda Maraykanka waydiistay in tababar la siiyo saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliyeed.
Xaaladdii u Dambeysay ee Dagaalka GaalkacyoXaaladda magaalada Gaalkacayo ee badhtamaha Soomaaliya ayaa degganayd maanta kaidb dagaalladii shalay halkaais ka dhacay oo ay ku dhintene ugu yaraan 7 qof, in ka badan 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Magaalada waxa aku suganw afdi ka socda dawladda federaalka
Wareysi: Taliyaha Nabad Sugida QarankaWareysiga ayaa Taliyaha Nabad-Sugidda Soomaaliya Gen. Cabdiraxmaan Tuuryare waxa uu kaga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin xaaladda amniga ee Muqdisho iyo amarro cusub oo dowladda ay soo rogtay.
Wareysi: R/W Cabdi Faarax Shirdoon SaacidVOA-da ayaa weydiisay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid caqabadda dowladda ka heysata ka hortagista weerarada ka dhanka ah hoteellada.
Indha Qarshe: Waa Been Warbixinta QMGen. Daahir Aden Cilmi “Indha Qarshe” oo wareysi siiyey VOA-da, ayaa warbixintaas ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin oo la been abuuray.
VOA-da oo Warreysatay Richard Stengel AMISOM:Kama Soo Bixin Shabeelada Hoose Afayeenka AMISOM Paul Njuguna oo u waramayay VOA ayaa beeniyay in AMSIOM ay ka baxday saldhigyo ay kaga sugnaayeen gobolka Shabeelada Hoose. Wuxuu sheegay in tani qeyb ka tahay dib u qaabayn ay ku sameynayaan ciidankooda.
Faafaahin: Weerarkii Shabaab ee QoryooleyWarar iyo faahfahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana ka wareysanay guddoomiyaha Shabeellada Hoose C/Qaadir Maxamed Nuur Siidii.
Wareysi: Wasiirka Arrimaha Dibedda DFWasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Cabdisalaam Cumar Hadliye oo maanta ka dhoofay magaalada London, ayaa wareysi uu arrimo badan kaga hadlay siiyey idaacadda VOA-da.
Kaliil oo Garbahaarey Tagay iyo Xiisad JirtaTegitaanka Kaliil ee Garbahaarey, ayaa xiisad ka dhalisay magaalada, kadib markii ciidamada Ethiopia ee jooga magaalada ay isku hareereeyeen gurigii uu ku sugnaa Kaliil.
Qulqulka Qaxootiga ee Qaaradda YurubIndhaha Caalamka ayaa inta badan u weecday qaxootiga Suuriyiinta ah iyo kuwa kale ee dalalka carabta ee rabashaduhu ay ka jiraan ee soo buux dhaafshey dalalka Hungry, Austri iyo Germalka, si u helaan nolol iyo nabadgalyo.
Wareysi: Madaxweynaha Maamulka GalmudugMadaxweynaha Galmudug C/kariim Xuseen Guleed ayaa wareysigan uga hadlay arrimaha Ahlu-Sunnada Dhuusamareeb, xiisadda kala dhaxeysa Puntland iyo waliba sida uu u arko mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya.
Diini oo ka Haday Doorka Ciidamada EthiopiaWasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, General Cabdulqadair Sheekh Cali Diini, ayaa beeniyay in ciidamo Itoobiyaan ah oo aan ka tirsaneyn AMISOM ay joogaan Soomaaliya.
Madaxweynaha oo ka jawaabay mooshinkaMadaxweyne Xasan wuxuu sheegay in xildhibaannada wada mooshinka isaga ka dhanka ah la garanayo taariikhda ay ku lee yihiin siyaasadda Soomaaliya, islamarkaana aanay Soomaaliya hakin karin.
Garoon diyaaradeed oo laga dhisayo BaraaweGaroonka cusub ayaa waxaa dhagax dhigay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Wareysi: Falanqeyn qorshaha hiigsiga 2016-ka Todobaadkan ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya laga sugayaa in ay soo gudbiso qorshihii looga gudbi lahaa 2016-ka.
Dagaal Ka Dhacay BakoolCiidamo ka tirsan AMISOM gaar ahaana kuwa ka socda dalka Ethiopia ayaa lagu soo waramayaa in ay wadada u galeen maleeshiyaadka Alshabab maanta iyagoo ku sii jeedey deegaanka Waajid ee ee gobolka Bakool.
Baarlamaanka oo Ansixiyay Laba GuddiBaarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod ku ansixinta labada Guddi ee kala ah Guddiyada Doorashada iyo Guddiga Xuduudaha iyo Federaalka oo ay soo magacawday Dawladda Federaalku. Guddiyadaasi ayaa ka kooban min sagaal xubnood.
Odowaa: Waa Guuleystay Qorshihii Gobolada Dhexe Shalay waxaa Xildhibaannada Baarlamaanka Galmudug ee gobolada dhexe ay doorteen Guddoomyaha Baarlamanka ee maamulkaas. Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdiraxman Xuseen Odowaa ayaa ka hadlay.
Waan-waan laga wado xiisadda ka Jirta Puntland
Tina Kaidanow oo Booqatay Muqdisho Xiriiriyaha Hawlgallada la Dagaallanka Argagixisada ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka Danjire Tina Kaidanow ayaa maanta Muqdisho booqatay
Gaas: Baarlamanku yuusan ku Mashquulin Jubba Madaxweynaha Maamulka Puntland Prof. Cabdiweli Cali Gaas ayaa gardaro ku tilmaamay mooshin yaalla baarlamaanka Somalia oo ka dhan ah baarlamaanka Jubbaland.
Shariif Xasan oo Dil ka BadbaadayShariif Xasan Sheekh Adan, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta ka badbaaday iskuday dil kadib markii la weeraray kolonyo uu la socday oo maraysay waddada u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye.
G.Wasiirada Oo Guddiyo Qaran AnshixiyeyShalay Golaha Wasiirada ee Dowladda Somalia ayaa ansixiyay sadex guddi Qaran oo kala ah Guddiga doorashooyinka Qaranka, Guddigga Xuduudaha iyo Arimaha Federalka, iyo Guddigga Adeegga Garsoorka.
Qaxootigii Ugu Badnaa oo Gaaray BoosaasoDooni siday tiradii ugu badneyd ee qaxooti ah ee ka yimaada dalka Yemen ayaa maanta soo soo gaaray dekedda magaalada Boosaaso, dadkan oo isugu jira Soomaali iyo Yemeniyin ayaa waxaa ka mid ah caruur, haween iyo dad waayeel ah.
Madaxweynaha oo Wareysi Siiyay VOAMadaxweyne Xasan Sheekh oo wareysi gaar ah oo VOA siiyay ayaa ka weerarkii Jaamacadda Garissa, xaaladda Soomaalida ku nool Yemen iyo Sacuudiga iyo Arrimo kale.
Qaxootiga Somalida ee Yemen oo la Celinayo Cabdisalaan Hadliye Cumar, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Dowladda Somalia ayaa sheegay in Dowladdu ay ka shaqeyneyso soo daad gureeynta Qaxootiga Somalida ee Yemen iyadoo kaashaneysa Qaramada Midoobay
Saylici oo ka Hadlay Arr. Khaatumo iyo AwdalMadaxweyne-ku-xigeenka Somaliland, Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici oo safar ku yimid Washington ayaa wareysi uu VOA siiyay kaga hadlay arrimaha Somaliland, maamulka Khaatumo iyo waliba gobolka Awdal ee bariga Somaliland.
Qaydiid: Shirku Cadaado ayuu ka Dhacayaa.Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale “Qaybdiid” ayaa sheegay inuu rajo weyn ka qabo in toddobaadka soo socda uu magaalada Cadaado ka furmo shirka maamul u sameynta Gobolada Dhexe iyo Mudug.
Weerar Cirka ah oo lagu Qaaday Sarkaal Al-shabaab ahWararka ka imanaya Gobolka Gedo ayaa sheegaya in diyaarad nooca aan duuliyaha wadin ay bartilmaameedsadatay baabuur ay la socdeen saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabab.
Muqdisho: Saraakiil lagu tuhmay Qaraxii SYL Hotel oo la maxkamadayn doono.Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maxkamad la soo taagi doono saraakiil ka tirsan booliiska iyo nabad sugidda oo dhowaan la qabtay kuwaasi oo lala xiriiriyey qaraxii ka dhacay Huteelka SYL bishii January.
Nin Soomaali ah oo Xaaskiisa ku Dilay NorwayNin Soomaali ah ayaa dalka Norway shalay ku dilay xaaskiisa, kadibna booliska isku dhiibay. 6 caruur ah oo uu ninkani dhalay ayaa la sheegayaa inay la wareegtay dowladda Norway.
Sharma'arke: Xukuumad Dheelitiran ayaan DhisayRa'iisul-wasaaraha Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo wareysi gaar ah siiyay VOA ayaa difaacay xukuumadda cusub ee uu soo dhisay, isagoo sheegay inay tahay mid dheelitiran oo ay ku jiraan dhinacyadii siyaasadda isku hayay.
Gaas oo ka Hadlay Heshiiska Somalia iyo SomalilandProf. Cabdiweli Gaas, madaxweynaha Puntland oo wareysi gaar ah siiyay VOA ayaa sheegay inuu diidan yihiin qeybo ka mid ah heshiiskii Djibouti ay ku gaareen Somalia iyo Somaliland, isagoo sheegay in labadoodu aysan isku koobi karin masiirka Soomaaliya.
Khilaafka Dowladda Federaalka SoomaaliyaWasiirka Garsoroka iyo Arrimaha Datsuurka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa manata sheegay in shaqada dib u habaynta garsoorka iyo tan dib u eegista dastuurka ay socoto.
MURANKA XEERKA GARSOONKAGuddoomiyaha Maxkamadda Sare Caydiid Cabdullaahi Ilkaxanaf ayaa sheegay in la doonayo in Garsoorka Soomaaliya la hoos geeyo Wasaaradda Caddaaladda ee dawladda.
Dowladda oo La Wareegtay BaraaweXaaladda magaalada Baraawe ayaa cakiran iyadoo ciidamada dawladda Soomaaliya iyo Kuwa AMISOM ay dul fahdiyaan magaalada. Goor hore oo saaka ahna, unug ka tirsna ciidanka ayaa tagay degaanka cirifka magaalada ee agagaarka Huteel Kolombus.
Muranka Garoomada Diyaaradaha GaalkacayoMaamullada Galmudug iyo Puntland ayaa wali waxaa ka taagan muran ku aadan garoomada diyaaradaha Gaalkacyo. Maamulka Galmudug ayaa sheegay inuu ka noqday xariyaadii uu ku soo rogey garoonka diyaaraha ee ay maamulaan maamulka Puntland.
Rag Al-shabab Ka Tirsan oo Jarmalka Lagu Xiray Sadex qof oo laba ka mid ah ay yihiin Somali heysata jinsiyadda Jarmalka, oo la sheegay inay ka tirsanaayeen Al-shabab ayaa dhawaan lagu qabtay dalkaasi
HRW: AMISOM Kufsi ayay Somalia ka GeysteenHay’adda Human Rights Watch ayaa ku eedeysey ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM inay kufsi u geystaan gabdho yaryar oo Soomaali ah, kuwaas oo inta badan xeryaha ciidamadaasi u doonta dawooyin iyo samafal.
Falanqeyn Amiirka Cusub ee al-ShababUrurka al-Shabab ayaa shalay ku dhowaaqay in Sheekh Axmed Cumar Abu Cubaydah uu yahay Amiirka Cusub ee Xarakada kadib markii duqayn toddobaadkii hore lagu dilay hoggaamiyihii hore ee ururkaasi Axmed Cabdi Godane.
Idaacadaha Kulmiye iyo Simba oo La XirayMagaallada Muqdishu waxaa dawladdu xirtay laba idaacadood oo madaxbannaan oo lagu kala magacaabo Kulmiye iyo Radio Simba. Idaacadahan ayaa VOA u sheegay in loo xiray inay sii daayeen warar la xiriira dilkii hoggaamiyhi ururka al-Shabab Axmed Godane
Al-shabab oo Laga Qabsaday BuulomareerCiidamada Dowladda iyo Amisom ayaa dagaal uga qabsaday ururka Al-shabab degmada Buulo-Mareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. Askari ka tirsan Amisom, iyo 11 Al-shabab ah ayaa ayaa ku dhintay dagaalka
Djibouti:Weerarkii Garoonka Argagixiso Lug Kuma Laha Dowladda Djibouti ayaa sheegtay in weerarkii toogassho ee ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalad Djibouti galabnimadii Isniinta uusan wax lug ah ku lahayn kooxaha argagixsada ee gobolka ka howlgala.
Ra'iisul-wasaaraha oo Booqday DhadhaabRa’iisul-wasaaraha Somalia, Cabdiweli Sheekh Axmed iyo wafdi uu horkacayo ayaaa maanta booqasho saacaddo qaadatay ku tagay xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya oo ay ku jiraan in ku dhow 4 boqol oo kun oo qaxooti Soomaali ah.
Galayr oo Madaxweynaha Khatumo Loo DoorteyRaiisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cali Khaliif Galeyr, isla markaana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federalka Soomaaliya ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maamulka Khaatumo
Wareysi: Shirka UN ee SomaliaMagaalada Muqdishu waxaa tagay safiirrada 15-ka waddan ee xubnaha ka ah Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Wafdigaasi waxay kulan la yeesheen madaxda dawladda Soomaaliya.
Jawaabo Laga Bixiyay Heshiiska G/dhexe Dowladda Somalia ayaa difaacday heshiiska lagu saxiixay Muqdisho ee maamulka loogu sameynayo Galgaduud iyo Mudug, balse maamullada Puntland, Ximin iyo Xeeb iyo qeyb ka tirsan ururka Ahlu-sunna Wal Jamaaca ayaa qaadacay heshiiskaasi.